Mafomu ekuti uwane mari yePaypal pane yako nhare mbozha 2020 ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Mafomu ekuti uwane mari yePaypal pane yako nhare mbozha 2020
Kana iwe uchida kushandisa nguva yakareba pane yako Android izvi zvinokufadza, ziva 5 mafomu ekuti uwane mari yePaypal Nenharembozha yako, nhasi ndichakuzivisa kune mamwe mafomu aunogona kuwana mari uchishandisa nharembozha yako. Mune mafomu aya unogona kuwana mari nekutamba, kupindura ongororo, pakati pezvimwe zviitiko.
Ndingawana sei mari nefoni yangu?
Zvakanaka, kuti uwane mari nefoni yako pane nzira dzakawanda, senge mapeji ewebhu kana kunyorera, mune ino nyaya isu tinongotarisa pane zvinoshandiswa.
Mune akawanda maficha atinozopa kwauri, iwe unofanirwa kurodha pasi mitambo uye wozoiridza. Zvino pamubvunzo wekubhadhara, vazhinji vanobhadhara nePaypal makadhi echipo, asi vane dzimwe nzira dzakawanda dzekubhadhara, unogona kusarudza iyo inokodzera iwe zvakanyanya.
Ngatitangei nerondedzero ye maapplication kuti uwane mari nefoni yako Android.
Chipo Hunter Club
Tora mibairo mizhinji nekuita zvirinyore mabasa sekukodha maapplication uye kuyedza iwo kwemazuva akati wandei. Unganidza mapoinzi kuti ugone kuchinjanisa iwo makadhi echipo ePaypal. Tora ongororo kuti uwane masendi uye utore mari yako kuburikidza nePaypal kana Amazon.
Kuwanika: Kune wese munhu
Nzira dzekubhadhara: Paypal uye Amazon Kadhi Kadhi
Chishoma kubhadhara: $5
Referral system: Si
Tora mapoinzi nekugadzirisa tsvagiridzo, mabasa ari nyore, kurodha pasi mafomu kuti uvaedze uye nekuita zviitwa zvakasiyana izvo zvinokumbirwa neshoko CashPirate. Iyo ine maviri-nhanho yekuendesa system, tora 10% yemapoinzi ayo aunotumirwa iwe unowana uchishandisa iyo app, iwe zvakare uchawana 5% yevanotumira kune vako vaunotumira.
Kuwanika: Pasi rese
Nzira dzekubhadhara: Paypal
Chishoma kubhadhara: $2.50
Tinya Tap Tap Mari
Panzvimbo yechitatu iapp Tinya Tap Tap Mari, mune iyi purogiramu unogona kuwana mari nekukanda maitiro, kutarisa mavhidhiyo uye kutora mamwe maongororo, iyi shanduro ine zvishoma zvishoma kubvisa madhora maviri chete.
Kuwanikwa: Kune wese munhu
Nzira dzekubhadhara: Paypal uye Amazon Chipo Mota
Chishoma kubhadhara: $2.00
Kuti uwane madhora neFeature Points application iwe unofanirwa kurodha pasi uye kutamba mitambo iyo yauchakupa iko kunyorera, unogona kuchinjana mapoinzi aunotora eAmazon zvipo makadhi kana mari muPaypal. Kana iwe ukaita kuti shamwari dzako dzibudise zvakare, vanogona kuwana 50% yezvavanowana.
Nzira dzekubhadhara: Amazon Chipo Makadhi, Itunes, Paypal
Kupedzisa nerunyorwa rwemaapplication aunogona kuita mari nefoni yako, iko kushandiswa kwe ChipoPanda Imwe hanzvadzi yebasa reCashPirate mune ino app unofanirwa kutora maapplication, kuvhura uye kuashandisa kuti vakwanise kuwana mapoinzi nekuchinjana iwo mari yePaypal.
Kuwanika: Dzimwe nyika chete
Nzira dzekubhadhara: Paypal uye akasiyana makadhi echipo
Ndidzo dzaive dzimwe dze mafomu aunogona kuwana mari nefoni yako uye utumire kune yako Paypal account, ndinotarisira kuti chinyorwa chakabatsira. Kana iwe uine chero mibvunzo maererano nekushanda kwezvikumbiro, tisiye isu mhinduro nemubvunzo wako uye isu tichaedza kupindura mubvunzo wako.
Applications, Apps, Paypal
Elivi muna Kukadzi 8, 2020
Inoshamisa inokurudzira chinyorwa chevanamuzvinabhizimusi. Izvo zvakandikurudzira zvakatowanda kuti ndiwane mari kubva internet.
Muchiitiko changu ndanga ndichidzidza kugadzira mafoni ekushandisa muhotart uye ndiri kudzidzawo nezvekutengesa paYouTube.
Kutenda neruzivo rwese rwapihwa.
Ramiro Fernandez muna Nyamavhuvhu 13, 2020
Ndakaedza CashPirate asi zvakadaro haisati yasvika pamubhadharo mudiki wandinotarisira kusvika munguva pfupi iri kutevera.
Music Players yeApple
Maitiro ekuisa PUBG Mobile Lite, zvishoma zvinodiwa
Mawachi akangwara anowedzera kushushikana kwedu
Maitiro ekubvisa zvisina basa zvinhu kubva pamufananidzo pa Android
Xiaomi Mi Band 6 ine NFC yakatangwa muRussia. Kubhadhara sei
Android 12 ikozvino inogona kuiswa. Ungazviita sei?
Ndeapi magajeti anotiita usimbe